Alexis Sanchez oo doonaya in uu katago Manchester United? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Alexis Sanchez oo doonaya in uu katago Manchester United?
(10-11-2018) Warar laga helay Cayaaryahanka dalka Chile iyo Kooxda Manchester United Alexis Sanchez ayaa sheegaya in Cayaaryaahnkaan uu doonayo in uu ka dhaqaajiyo Naadiga dalka England kadib markii uu laqabsan waayey.
Alexis Sanchez oo Manchester United kaga soo biirey Arsenal dhawaan isla Markaana ah Xiddiga ugu mushaarka badan Naadigiisa iyo Guud ahaan Horyaalka Premier League ayaa lacadeeyey in uu bisha Janaayo u dhaqaaqi doono kooxda dalka France ee Paris Saint-Germain Naadigaas oo u soo bandhigay qandaraas iyo mushaar macquul ah.
Wargeyska The Times oo soo xiganaya Wakiilka Cayaaryaahnka Manchester United Fernando Felicevich ayaa daabacay in ay dheceen Wadahadalo is afgarad ku dhawaaday oo dhex maray labada dhinac isla Markaana laga yaabo in ay suurta galaan maaadaama Alexis Sanchez ay ka Go aantahay in uusan lasii shaqayn Jose Mourinho kana dhaqaajiyo Garoonka Old Trafford.
Sanchez ayaa Manchester Unted u Saftay 28 Kulan oo kaliya waxaana uu aaminsanyahay in Macalin Jose Mourinho ku sameeyey bahdilaad kadib markii uu si ula kac ah kaga reebay Cayaaro badan isaga oo Caafimaad qaba.